Kitapo ny kalandrie tamin'ny taona 2016 | Famoronana an-tserasera
Efa akaiky ny 2016 ary azo antoka fa maro aminareo no efa manana drafitra kely amin'ny fanombohan'ny taona vaovao. Ny fomba tsara hametrahana tanjona dia ny hampivelatra a drafitra stratejika mivaingana misy hetsika manokana sy daty fanarahana. Raha manana tetikasa ao an-tsainao ianao mandritra ny volana ho avy dia mamporisika anao izahay fa ny dingana voalohany hataonao dia ny mitazona kalandrie iray na maromaro hahafahana mandrafitra ny drafitrao araka izay azo atao.
Misy ny olona mbola aleony ny kalandrie klasika sy ny endrika taratasy na dia misy aza ny rindranasa maro afaka mahafeno io filana io. Ny zava-drehetra dia hiankina amin'ny karazana olona misy anao sy ny fomba fiasanao koa. Izany no antony hizaranay anao eto ambany fonosana kely (tsotra sy mandeha tsara izay eny) miaraka amin'ny kalandrie. Na izany na tsy izany dia afaka mahazo zavatra hafa mahomby kokoa isika. Ao amin'ny tranonkala dia misy loharanom-pahalalana ampy hananganana kalandrie, toy ny pejy 1000artistas izay manome antsika rafitra iray tena intuitive sy tsotra hamoronana ireo kalandrie natokana ho azy miaraka amin'ny sarinay manokana ary koa manome safidy ho anay hampidina azy ireo atsy aoriana ary maimaimpoana amin'ny endrika PDF.
Raha te haka ny kalandrie dia tsy mila miditra amin'ilay pejy fotsiny isika Calendarsvip izay ahitantsika môdely maromaro mifangaro amin'ny endrika isan-taona na isam-bolana tonga lafatra amin'ny fanontana, na mivantana amin'ny fisintomana amin'ny endrika .doc, .xls na .pdf.
Modely kalandrie isam-bolana maimaim-poana
Modely kalandrie isan-taona maimaimpoana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Kitapo ny kalandrie tamin'ny taona 2016